Maalinta Deegaanka Adduunka oo maanta laga xusay Garowe – Radio Daljir
Juunyo 5, 2015 7:48 b 0
Jimco, Juun 05, 2015 (Daljir) — Wasaaradda Deegaanka, Dalxiiska iyo Duurjoogta Puntland ayaa maanta qabatay xuska maalinta Deegaanka Aduunka waxaana ka qayb galay wasiirku xigeenka wasaarada Deegaanka, Qaar ka mid ah gudooomiyaasha gobolada, khabiiro dhanka deegaan iyo nabadoono.
Xuskan oo la dhigo sanad kasta 5 bisha Juun ayaa looga hadlaa dhibaatada Deegaanka iyo sida wax looga qaban karo dhibta Deegaanka jirta sida xaalufka iyo jarista dhirta oo si weyn u saameeyey deegaanka Soomaalida.
ku simaha Agaasimaha wasaaradda Deegaan Puntland Liibaan Maxamed Faarax ayaa sheegay in sanadkan aduunka oo dhan la isku raacay sidii looga faa’iideysan lahaa khayraadka Deegaanka, Dhinaca Puntland ayuu sheegay in dadkeeda iyo dowladda u taagan yihiin ilaalinta deegaanka si khayraadka looga faa’iideysto.
Gudoomiyaha Gobolka Mudug Cabdulqaadir Shire Faarax Ereg oo ka qayb galay xuska maalinta Deegaanka Aduunka ayaa ka hadlay dhibaato uu sheegay in uu ku arkay deegaamada Puntland oo loo geystay Isagoo tusaalooyin u soo qaatay xirmaysiga dhulka oo uu sheegay in dad iyo duunyo dhibaato ka soo gaarto, Gudoomiyaha wuxuu sidoo kale ka hadlay faa’iidada Deegaanka gaar ahaan dhirta.
Wasiirku xigeenka wasaaradda Deegaanka Puntland Faarax Cali Cabdi ayaa sheegay in dhibaato badan ay ka jirto Deegaanka puntland wuxuuna ka digey hadii ay sii socoto dhibta loo geysanayo deegaanka in nabaad guurku ku sii kordho, Ka hor taga dhibaatada Deegaanka ayuu Wasiir ku xigeenku sheegay in wasaaraddu qorshayaal ka samaysay qaarkoodna lagu guuleystay in wax laga qabto sida dhuxusha.
Wasaaradda Deegaanka Puntland ayaa deegaamada Puntland ka fulisay mashaariicyo kala duwan oo wax looga qabanayo xaalufka deegaanka iyo Jarista dhirta, waxayna sheegtay wasaaraddu in dadka Puntland ee ku nool miyiga iyo deegaamada fog ay markasta kala hadasho sidii loo ilaalin lahaa.